I-Metal Small Tin Box ene-Hinged Lidelwe Ukupakishwa Kwe-Pipi
Ulapha: Ikhaya / Amathini Amakhekhe Nama-Mint / Amapakeji Okuphakisha Ukudla / Amabhokisi Esikwele / Ibhokisi le-Tin Box / I-Metal Small Tin Box ene-Hinged Lidelwe Ukupakishwa Kwe-Pipi
amabhokisi amancane wesipho esinezikhala
njengomkhiqizi ofanelekayo wokufaka itini, i-YiCheng Industrial inikezela ngebhokisi le-iron elincane lensimbi enendawo enamathiselwe kuye ukufakwa kwamaswidi. Kunezizathu ezizwakalayo imikhiqizo ephezulu yokuphela ifakwa emithini. Abathengi benza ukuxhumana ngokomzwelo nokupakisha namathini anika inani elihlukile elimele ikhwalithi ephezulu. Ukufakwa kwensimbi kuthola imbuyiselo enkulu kunezinye izinketho ngoba imikhiqizo efakwe emgqonyeni idinga inani eliphakeme.
Isikhalazo se-rafu esikhulisiwe
Kukhuliswe ukuqashelwa komkhiqizo
Kwenziwe ngensimbi eyenziwe kabusha
Into Yomkhiqizo: I-Rectangle Push Nebhokisi Le-Tin
Zonke 5 /Amathoni e-Aluminium 0 /Amabhisikidi namathini Amakhukhi 0 /Amabhakede 0 /Amathini Amakhekhe 0 /Amathangi ekhandlela 0 /Amathini Amakhekhe Nama-Mint 0 /Amabhokisi we-Chocolate Tin 0 /Amathanga kagwayi 0 /Amathofi wekhofi 0 /Ibhokisi Lezimonyo 1 /Amapakeji Okuphakisha Ukudla 4 /Isipho, Amathikithi Okuphromotha 0 /Imikhiqizo Eshisayo 1 /Amabhokisi we-Tin angajwayelekile 0 /Amathiphu we-Lunch 0 /Ipensela, Amathenisi wezinto zokubhala 0 /Ibhokisi le-pet Food Tin 0 /Amabhakede e-PVC (PET) 0 /Ibhokisi Lezinhlaka Eziyindilinga 0 /Amabhokisi we-Round Tin 0 /Amabhokisi Esikwele 1 /Amathiphu Tea 0 /Ibhokisi le-Tin Box 0 /Amathini Amathoyizi, Imali Nemali 0 /Ithreyi, Ibhakede, Coaster, Isiginali ye-Tin 0
I-Rectangular Push ne-Donsela imihlobiso ye-Metal Zokuhlobisa I-Metal Iziqukathi Zezinsimbi Ezincane Zesi-Metal Zokupakisha Obuhle Pheqa phezulu